Fuuz Manufacturers & Suppliers | China fuuza Factory
XRNT ndabere fuuz
A na-eji internepter magne X na usoro nwere ngwaọrụ nchebe dị ugbu a dị ka Bay-o-net Fuse ma ọ bụ Magne X. Ihe mgbagha magne X nke na - arụ ọrụ nke ọma ugbu a na - ebelata mmetụta nke nnukwu nsogbu ugbu a na nrụgide na akụrụngwa na usoro nkesa. ma oke nkwụsịtụ ya kachasị elu ga-ekpochapụ ihe kachasị elu ...
SMRS Fuuzị waya
A na-eji waya eji eji abuo eme ihe na Bay O-net iji kpuchido ngwa ahia iji chebe ngwa nkesa na emebi emebi ma chebe sistemụ nkesa site na ngwa adaghị. Dual N'ịchọpụta fuuz waya bụghị naanị abụọ mmejọ, oké ibu okwukwo na transformer ọmụmụ okpomọkụ. Ha ga-ejedebe ikpo ọkụ na-eme ogologo oge nke oke ibu na gburugburu ebe obibi dị elu.
bay o net fuuz njide
Bay-o-net Assembly bụ ihe dị mkpirikpi nke onye na-agbanwe mmanụ, iji kpuchido akụrụngwa ahụ mgbe ọ dị ugbu a. Mgbe ịwụnye waya fuuzị na ya, Bay-o-net ga-enye nchekwa, nchekwa zuru oke nke ọma, dịka ọnọdụ dị ugbu a, mmanụ mmanụ dị. Mgbakọ Bay-o-net dabara adaba maka waya ikuku nke ugbu a, waya ntanye ọhụụ, waya izipu mmewere, yana ELSP na-egbochi njedebe fuse, wdg. O adabara maka sistemụ ike ike dị elu na nke ọzọ nke 50HZ, volta ọkọlọtọ ...